गठबन्धनका तीनै नेता सबै न्यायाधीशको ‘डिफेन्समा’ - Globe Nepal
गठबन्धनका तीनै नेता सबै न्यायाधीशको ‘डिफेन्समा’
ग्लोब नेपाल	बुधबार, १० कार्तिक २०७८ गते १७:०६ मा प्रकाशित
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि अहिलेको विवाद चर्केको भन्दै हमाल कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको स्पष्टीकरण दोहोर्‍याएर बचाउ गरे । महाअभियोगबारे गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको भन्दै उनले अदालतमा देखिएको विवादबारे गठबन्धनले साझा धारणा बनाउने बताए । व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड पनि महाअभियोगको पक्षमा नरहेको बताइन्छ । यद्यपि माओवादी नेताहरू भने प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन आधार र कारण रहेको बताइरहेका छन् ।
मंगलबार दिउँसो ओलीले भने-
परमादेश त एक जना होइन पाँचै जनाले गरेको होला? पाँचै जनाले गरेको हो भने एक जनाले मात्र किन राजीनामा गर्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू? पाँचै जनाले परमादेश गरेर देश यो हालतमा पुर्‍याउनुभएको छ भने पाँचै जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र? तपाईहरूको सर्वसम्मत फैसलाले दुर्गन्ध फैलिएको छ । यस हिसाबको अदालतको मानमर्दन यहाँहरूले गरिरहनुभएको छ ।
मंगलबार अपराह्न प्रचण्डले भने-
मन्त्रीको विषयलाई लिएर यो विवाद जसरी सुरू भयो, गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसकै कोटाबाट कांग्रेसकै प्रतिनिधिका रूपमा गरेको हो । पछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो परिस्थिति नयाँ बन्यो । त्यहीँबाट यो विवाद चर्केको छ । एउटा बिन्दुमा गठबन्धनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ । महाअभियोगबारे कुनै छलफल भएको छैन । पाँचवटै दल बसेर धारणा सार्वजनिक गर्छौं । न्यायालयको स्वतन्त्र गरिमा कहीँ कतैबाट आँच नआओस् भनेर हामी सबै सतर्क हुनुपर्नेछ । अहिले एउटा डिबेट चलिरहेको छ । एउटा निष्कर्षमा पुग्छ । हामीले सबैले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिकाले आ-आफ्नो स्वतन्त्रता र गरिमालाई कायम राख्न बल गर्नुपर्छ ।
बुधबार दिउँसो देउवाले भने-